IFTIINKACUSUB.COM: Qabyaaladu waa Dawo , si khaldan loo isticmaalay.
Wadamada yurubta ma jiro lagamana yaqaano wax layidhaa ,seedo ,Sodog ,inaabti ,ilmadeer,habar-wadaag ,sababta oo ah waxaan marka hore jirin wixii xidhiidhkan iyo magacyadan samay-nayay oo ah qabiilka ,taasi waxa ay ina tusinaysaa in hadii aynu Somali nahay aynu taas ku fiicanahay balse aynu garab wadno midii xumayd ee Nabigu csw ku tilmaamay in ay tahay wax Uraysa.
Hadaad dib u fiiriso siirada Nabiga csw ,waxa aad arkaysa in Diinta Islaamka ee aynu maanta haysanno , in ay inasoo gaadho waxaa sabab u ahaa ,qabaa'ilkii faraha badnaa ee Carbeed ee uu Rasuulku maalinba qaar la heshiinayay.
Taas waxa aan ka odhan lahaa hadii aynu Soomali nahay ,waxa aynu isku soo xukunay nidaamyo badan,waxa aynu soo tijaabinay shuuciyadii ,waxa aynu iminka ku guda jirnaa oo dhex-dabalanaynaa Dimuqraadiyadii ,oo meel daran inala maraysa ,midnaba kamaynaan faa'iidin.
Guntii iyo gaba-gabadii waxa kaliya ee aan isleeyahay arintan waa lagaga bixi karaa waxa ay ila tahay, in loo noqdo Kitaabka Ilahay sunaha Nabiga csw ,kaas oo isagu awood buuxda u leh in uu is falgaliyo waxyabo badan oo aynu isku wadi kari la'nahay.